Ndị ọzọ na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Ụlọ ọrụ China ndị ọzọ
Akụkụ ọla diamond maka ịcha ma ọ bụ egweri ihe na okwute
Akụkụ ọla diamond eji egbutu ma ọ bụ gwerie ihe na nkume blocks. Emere ya na usoro pụrụ iche. Ihe irighiri diamond nwere ike dị elu, oke dị elu, nguzogide iyi dị nkọ na ogologo ndụ. Akụkụ ígwè dị na ụdị dị iche iche na nha, ngwa agha na adhesives nwere ike ịhazi ya.
3 ″ Ez Gbanwee HTC Resin Pad Adapter
HTC EZ nkwụnye maka ngwa ngwa dochie resin polishing pad na HTC igwe. Enwere ike ịmegharị ka ọ jiri ọtụtụ igwe egweri na polishing dị iche iche. Emebere akwa nylon ka ọ rapara n'ahụ ahụ, anya mmiri ugboro ugboro agaghị emebi ya. Dị mma, rụọ ọrụ nke ọma na ọnụ ahịa.
Carbide Bush Hammer Roller Bits maka nkume na ihe dị n'elu
Carbide Bush Hammer Roller Bits bụ maka nkume na ihe ndị dị n'elu Iji mee ka elu ahụ dị ike na ala na-adịghị mma, dị ka litchi na-agwụcha elu. High wear eguzogide na ogologo ndụ.Aggressive na efficient.The ohia-hammer rollers isi nwere ike mere na dị iche iche njikọ na-. dabara na igwe dị iche iche.
Ngwa Lavina Diamond Bush Hammer Roller Plate Maka Nkume Granite Concrete
Diamond Bush Hammer rollers maka ime elu ahụ siri ike na ala na-abụghị nke na-amị amị, dị ka litchi na-emecha elu.Ọ nwere ike iji ma ọ bụ enweghị efere. Anyị na-eme ihe dị iche iche ohia hama rollers maka ụdị igwe egweri dị iche iche, dị ka Lavina, Husqvarna, HTC, Terrco. , wdg. Anyị na-enyekwa ọrụ nhazi.
Ngwa Marble Granite Concrete diamond Nkuku Ngwunye Bit Ngwa maka igwe ihe nkuku
Diamond akuku sharpening ngwá ọrụ na-eji nkọ nkuku, steepụ, n'okpuru cabinets, akụkụ, beveled nkọ n'ọnụ,etc.Suitable maka egweri nile di iche iche nke ihe ala na nkume surfaces.The elu egweri ziri ezi na-eme ka elu àgwà ọma mgbe ọgwụgwọ. Fast egweri, elu egweri arụmọrụ.